ह्विलचियरमा पुगेर मतदान !
दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काठमाडाँैस्थित सानो गौचरन मतदान केन्द्रमा ह्विलचियरमा पुगेर मतदान गर्दै मतदाता । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
दक्षिण अफ्रिकाका पुर्व क्रिकेटर जोन्टी रोड्सले बुधबार कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा यू-१९ र यू-१६ राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण दिनेक्रममा नेपाली राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक जगत टमाटासँग । तस्वीर रोशन सापकोटा
सुर्य देवको आरधाना !
रुपन्देहीको शुद्धोद्धन गाउँपालिका— १ स्थित घमाहा खोलामा सुर्य देवको आरधाना गर्दै स्थानीय युवती । यसबर्षको छठपर्व बुधवार उदाउँदै गरेको सूर्य भगवानलाई अर्घ दिँदै सम्पन्न भएको छ । तस्वीर : युवराज
यसरी मनाइदै छ छठ, छठघाटहरुमा ब्रतालुको घुइचो (फोटो फिचर)
काठमाडौँ। छठ पर्वका अवसरमा स्थानीय कमलपोखरी पुगेर आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सूर्यलाई अर्घ दिई पूजार्चना गरेका छन् । काठमाडौँका थापाथली, गौरीघाट, रानीपोखरी र कमलपोखरीमा छठ पूजा गर्ने
छठ पर्वमा सिंगारिएको छठीघाट !
वीरगञ्जको घडिअर्वास्थित छठीघाटलाई सोमबार रंगबिरंगी बिजुली बत्तीले सिंगारिएको दृश्य । घडिअर्वा छठघाटलाई सजाउन रु. १४ लाख भन्दा बढी खर्च गरिएको घडिअर्वा पोखरी छठपूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद साह कानुले जानकारी